CORONAVIRUS CUSUB: VADEMECUM. Waxa la Sameeyo Xaaladaha Dhibaatada - Xaaladda degdega ah ee Coronavirus
Evidenza / caafimaadka / -Articles caafimaadka
CORONAVIRUS CUSUB: VADEMECUM. MAXAAD SAMAYN KARTAA KHATAR KHATAR
by Francesco Verdolino · 11-Mar-2020
Buug-gacmeedku wuxuu ka abuuray Wasaaradda Caafimaadka oo leh Machadka Sare ee Caafimaadka iyo Xarunta Ka-hortagga iyo Xakameynta Cudurrada ee Yurub, buug-gacmeedka ayaa ka jawaabaya shakiga iyo welwelka badan ee soo noqnoqda wuxuuna raacaa talooyinka ka hortagga . (cusbooneysiiyay Maarso 10, 2020)
1. Waa maxay calaamadaha aan u baahan nahay inaan iska ilaaliyo?
Qandho iyo calaamadaha hargabka-sida qufaca, cunaha oo xanuun ah, neefta oo ku yaraata, murqaha oo xanuun, daal ayaa ah astaamaha suuragalka infekshanka coronavirus-ka cusub.
2. Waxaan qabaa qandho iyo / ama calaamadaha ifilada, maxaan sameeyaa?
Gudaha joog oo wac takhtarkaaga qoyska, takhtarka carruurta ama ilaaliyaha caafimaad.
3. Mudo intee leeg ayay qaadataa in la waco dhakhtarka?
Isla markiiba. Haddii aad u maleynaysid inaad cudurka qabtid, wac isla markaaba aad dareento astaamaha caabuqa neef-mareenka, adigoo sharxaya astaamaha iyo xiriirada halista ku jira.
4. Ma xiriiri karo dhaqtarka qoyskeyga, maxaan sameeyaa?
Wac mid ka mid ah lambarrada deg-degga ee ku taxan bogga www.salute.gov.it/nuovocoronavirus
5. Miyaan toos toos ugu tagi karaa qolka gargaarka degdegga ah ama dhaqtarka qoyskeyga?
Maya. Haddii aad aado qolka gargaarka degdegga ah ama aad aado bukaan-socod eegtada bukaannad adigoon marka hore oggolaanin takhtarkaaga, waad qaadsiin kartaa dadka kale.
6. Sideen u ilaalin karaa xubnaha qoyskayga?
Had iyo jeer raac dabeecadaha nadaafadda shaqsiyeed (gacmahaaga si joogto ah ugu maydh saabuun iyo biyo ama isticmaal jaale ku saleysan alkolo) oo ka dhig meesha deegaanka nadaafad. Haddii aad u maleynaysid inaad cudurka qabtid, xiro maaskaro qalliinka ah, ka fogow qoyskaaga oo had iyo jeer jeermiga ka nadiifi waxyaabaha maalin kasta ah.
7. Halkee baan ka qaadi karaa imtixaanka?
Tijaabooyinka waxaa lagu sameeyaa kaliya shaybaarada Adeegga Caafimaadka Qaranka. Haddii dhakhtarkaagu u maleeyo in baaritaan loo baahan yahay, wuxuu ku siin doonaa tilmaamo ku saabsan sida loo sii wado.
8. Halkeen ka heli karaa macluumaad kale oo lagu kalsoonaan karo?
Raac kaliya tilmaamaha gaarka ah iyo cusboonaysiinta ee shabakadaha rasmiga ah, maamulada maxalliga ah iyo Ilaalinta Madaniga.
SHARCIYADA 10 KU SAABSAN LUUQADAHA LAGU SAMEEYO
Hagis ama saacidaad caafimaad ee Ajaanibta.